बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप १५ खर्ब पुग्यो, कसको कति पैसा छ ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यक्तिगत निक्षेप २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यो सँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेप १५ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड..
काठमाडौं । गत आर्थिक बर्षको लाभांश घोषणा गर्न वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सानिमा बैंक पहिलो बनेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेको बैंकले नगद लाभांश मात्र प्रस्ताव गरेको छ..
माछापुच्छ्रे बैंकले तीन महिनामा ३८ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक चालू आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको नेपाल फाइनान्सीयल रिपोर्टिङ स्टान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रतिवेदनमा ३८ करोड ७९ लाख वितरण योग्य नाफा आर्जन गरेको जनाएको छ ।..
ग्लोबलआइएमई लघुवित्तले प्रथम त्रैमासमा तेब्बर बनायो नाफा
काठमाडौं । ग्लोबलआइएमई लघुवित्तको चालू आर्थिक बर्षको प्रथम त्रैमासमा वित्तीय विवरणको अधिकांश सूचक सकारात्मक देखिएको छ। चुक्ता पूँजी स्थिर रहेको लघुवित्तले खराब कर्जा घटाएर प्रतिशेयर आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार गरेको वित्तीय विवरण..
भक्तपुरको सरस्वतीस्थानमा ग्लोबल आइएमईको शाखारहित बैंकिङ सेवा
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले २०७५ कार्तिक ९ गते शुक्रबार नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । थप गरिएको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवासंगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संख्या १०४ पुगेको..
एन आई सी एशियाको नयाँ शाखा भोजपुरको दिङ्गलामा
काठमाडौं । एन आई सी एशिया बैंकको नयाँ शाखा कार्यालय षडानन्द नगरपालिका दिङ्गला, भोजपुर स्थित दिङ्गला शाखाको षडानन्द नगरपालिकाका मेयर विरबल राईबाट शुक्रबार भव्य समारोहकाबीच समुद्घाटन भएको छ । उक्त बैंकको..
नेपाल क्लियरिङ हाउस र आइएमर्इ पे बीच सम्झौता
काठमाडौं। नेपाल क्लियरिङ हाउस र आइएमर्इ डिजिटल सोलुसनबीच अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (एनसिएचएल आइपिएस सिस्टम) र अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी (कनेक्ट आइपिएस इ-पेमेन्ट सिस्टम)मा अप्रत्यक्ष सदस्यको रुपमा आवद्ध हुने गरी..
एनआईसी एसिया बैंकको नयाँ शाखा संखुवासभाको मानेञ्ज्याङ्गमा
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको नयाँ शाखा खाँदबारी नगरपालिकास्थित मानेञ्ज्याङ्गमा संचालनमा आएको छ। उक्त शाखाको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले उद्घाटन गरे। सो अवसरमा उनले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य..
आइएमर्इ ग्रुपले माग्यो ५३ कर्मचारी
काठमाडौं। आइएमर्इ ग्रुपले क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयकालागि विभिन्न पदमा ५३ जना कर्मचारीकालागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। ग्रुपले ७ वटा प्रदेश स्तरीय कार्यालयकालागि बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर माग गरेको हो। त्यस्तै ७ वटै प्रदेश स्तरीय कार्यालयकालागि..
एनआईसी एशिया बैंकले ४ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एक हजार अंकितको दरले ४० लाख कित्ता बराबरको ४ अर्ब रुपैयाँ एनआईसी एशिया ऋणपत्र २०८५/८६ को बिक्री प्रवन्धकमा एसबिआई मर्चेन्ट नियुक्त भएको छ । एनआईसी एशियाले..
काठमाडौं। नेपाल बङगलादेश बैंकले ग्राहकहरुलाई सगौरव बचत खाताअन्तर्गत दशैं शुभकामना योजना ल्याएको छ। यो योजनामा आवद्ध हुने ग्राहकहरुले आफ्ना खातामा १ लाख वा त्यसभन्दा बढी निक्षेप गरेमा बैंकले २५ ग्रामको चाँदीको..
दशैं बिदाको दिनमा कुन बैंकको कुन शाखा कतिबजे खुल्छ हेर्नुहोस
काठमाडौं–दशैं बिदाको समयमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शाखा तथा काउन्टर खुला गरेर सेवा दिने भएका छन् । बैंकहरुले बिदाको दिन सेवा दिने भन्दै काउन्टर र शाखाहरु खुला रहने मिति..
एकै दिनमा ४६ अर्ब रूपैयाँ कारोबार
काठमाडौं । दसैं सुरुभएसँगै बैंकहरूमा चेक सटही र रकम लेनदेन बढेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसले यस्तो कारोबार एकै दिन ४६ अर्बभन्दा बढी गरेको छ । बिहीबार मात्रै क्लियरिङ हाउसमा ४६..
नयाँ नोटमा गभर्नरको हस्ताक्षर र नम्बर नै छैन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको हस्ताक्षर नभएको नोट बजारमा पुगेको छ। दशैंका बेलामा निर्वाणा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सामाखुसीबाट ५० रुपियाँको नोटमा हस्ताक्षर र नम्बर नभएको फेला परेको..
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको ४० प्रतिशत लाभांस पारित
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट शेयरधनीलाई २० प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको शुक्रबार सम्पन्न सातौं वार्षिक..
भद्र सहमतिपछि कति घट्यो ब्याज ? नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले एकआपसमा मिलेमतो गरी नयाँ व्याजदर कायम गर्ने समझदारी गरेपछि धमाधम नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । बिहीबार मात्र बैंकर्स संघको बैठकबाट ब्याजदरको बिषयमा नयाँ समझादारी गरेका..
नयाँ गाडी किन्न बाणिज्य बैंकले ९ प्रतिशत ब्याज मै ऋण दिने
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले चाडपर्व उत्सव योजना अन्तर्गत ९ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यक्तिगत सवारी प्रयोजनको लागि नयां गाडी कर्जा प्रोडक्टको शुभारम्भ गरेको छ । गाडीको कोटेशनमा अंकित मुल्यको बढीमा ६५..
शनिबार पनि बैंक काउण्टर र क्लियरिङ हाउस खुला राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार राजस्व बुझ्ने बैंकका शाखा तथा काउण्टर खुला राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले राजस्व बुझ्ने सबै बैंकका शाखाहरु असोज २७..
कठमाडौं । एनएमवि बैंक र कर्जा बजारबीच सिम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार एनएमबि बैंकको कर्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी कर्जा बजारबाट लिन सकिने बैंकले जनाएको छ। ग्राहकले कर्जा बजारबाट कर्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया..
लक्ष्मी लघुवित्तको २६ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा
काठमाडौं । लक्ष्मी लघुवित्तले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले असोज २१ गते आइतबार सम्पन्न बैठकले २६.३२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव..
कमल ज्ञवालीको नकारात्मक नजिरले अन्य बैंकरलाई पनि झस्काइ रहनेछ.....
काठमाडौं । नेपाली उखान ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भनेजस्तै भयो किष्ट बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीका लागि। ज्ञवालीले आफैँले स्थापना गरेको बैंकलाई समस्यामा पार्ने गरी ऋण लिने वा दिने..
आजबाट दसैंका लागि नयाँ नोट यि बैंकका शाखामा पाइन्छ, २७ हजार रुपैयाँसम्म
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैँका लागि नयाँ नोट असोज २१ गतेबाट वितरण गर्ने भएको छ। गत वर्षजस्तै यसपालि पनि राष्ट्र बैंकले तीन सरकारी बैंकसहित निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट..
प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा पाँच नयाँ शाखा एकैसाथ शुभारम्भ
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आज नयाँ पाँच शाखा तथा उप–शाखाबाट कारोबार शुरु गरेको छ । महेन्द्रनगर शाखा कार्यालय, बेलौरी उप–शाखा कार्यालय, लम्की उप–शाखा कार्यालय, फिदिम उप–शाखा कार्यालय तथा ईलाम..
काठमाण्डौमा सिटी एक्सप्रेसको निःशुल्क बस सेवा
काठमाण्डौ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर प्रालिले नेपालीहरुको महान् चाड दशैंलाई लक्षित गरी ७ दिने “निःशुल्क बस सेवा” सुरु गरेको छ । यो निःशुल्क बस सेवा असोज १७ गते देखि २३..
कास्की र पर्सामा महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ शाखा
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंकले कास्की र पर्सामा नयाँ शाखा शुरु गरेको छ । कास्की जिल्ला, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं ३०, स्थित सिसुवा शाखा तथा पर्सा जिल्ला, विरगंज महानगरपालिका वडा..
निर्धन उत्थान लघुबित्तले ४२ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा
काठमाडौं। निर्धन उत्थान लघुबित्त वित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। गत वर्षको नाफाबाट संस्थाले करिब ४२.११ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। जसमा संस्थाले २० प्रतिशत बोनस शेयर र उक्त बोनसको..
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिन राष्ट्र बैंकको परिपत्र, यस्तो छ ऋण पाउने प्रक्रिया
काठमाडौं । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर शैक्षिक ऋण पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहिवार सबै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा..
आशा लघुवित्तले एकैदिन बिस्तार गर्यो ५ स्थानमा शाखा
काठमाण्डौ । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले असोज ११ गते एकैदिन थप पाँच वटा शाखा कार्यालयहरु स्थापना गरी कारोबार शुरु गरेको छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका, कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका, बाराको आदर्श कोटवाल..
धनकुटा र अछाममा खुल्यो प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको नयाँ शाखा
काठमाण्डौ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले असोज ११ गते विहिवारदेखि आफ्ना नयाँ दुई उप–शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । धनकुटा उप–शाखा तथा अछाम उप–शाखाको एकैसाथ शुभारम्भ गरी कारोबार सुरु गरेको छ..
स्वावलम्बन लघुवित्तले २५ प्रतिशत बोनस सेयर ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्तको असोज ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको २९२ औं बैठकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट कम्पनीले २५ प्रतिशत बोनस शेयर तथा ११.८४ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कूल ३६.८४..
Results 1896: You are at page 14 of 64